बिध्यालय भवन उद्घाटनमा महानायक गार्जिय पछी | THE CINEMA TIMES
NepalNews Author:	The Cinema Times - Feb 11, 2017
बिध्यालय भवन उद्घाटनमा महानायक गार्जिय पछी
गोरखा जिल्लाको श्रीनाथकोटमा रहेको जनकल्याण माध्यमिक बिध्यालयको नव निर्मित भवन उद्घाटन भएको छ । भूकम्पले उक्त बिध्यालयको सबै भवन ध्वस्त भएपछि घाँसी नेपालको सहयोगमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको थियो । उक्त भवनलाई महानायक राजेश हमालले उद्घाटन गरेका हुन् ।
गोरखा जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी समेत उपस्थित भएको कार्यक्रम औपचारीक पछि अनौपचारिक साँस्कृतिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो । राजेश हमालले जब हातमा माईक मात्र के लिएका थिए, दर्शकहरुबाट ताली बर्सिए । सानो र पातलो गाउँमा भएको कार्यक्रममा सयौं दर्शकहरु जम्मा भएका थिए । स्थानीयका अनुसार राजेश हमाल आउने खबर ढिला मात्र थाहा पाएपनि पाँच गाउँदेखीका मान्छेहरु हमाल हेर्न आईपुगेका थिए । यति मात्र नभएर जब हमाल विद्यालयको एक शिक्षीकासँग नाचे तब दर्शकहरु बाट सिठी र ताली निरन्तर बजीरहे ।
हमालले कार्यक्रममा निकै रमाईलो भएको र आफुले सबैभन्दा बढी पहिलो पटक नाचेको समेत बताए । बिध्यालयको मिससँग लगातार बिस मिनेट भन्दा बढी उनले नृत्य गरेका थिए । पछि उनले आफ्नै चलचित्रका पुराना संवादहरु सुनाउँदा दर्शकहरु स्टेजमै घेरिएका थिए । उनीहरुले निरन्तर राजेश दाई हाई हाई भनी रहे । कार्यक्रममा दर्शकहरुले हमाललाई कहिले राजु, कहिले शंकर त कहिले अर्जुन भनेर लगातार बोलाईरहेका थिए ।एक बर्ष अघि महानायक राजेश हमालले नै शिलान्यास गरेका थिय । घाँसी नेपालको अभियन्ता समेत रहेका हमालले उद्घाटनसँगै साँचो हस्तान्तरण गरे । पाँच कोठे भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन पाएपछि स्थानीय, विद्यार्थीहरु र विद्यालय परिवार खुशि भएका थिए ।
Tags:a Nepali movie, rajesh hamal
बिध्यालय भवन उद्घाटनमा महानायक गार्जिय पछी0out of5based on0ratings.0user reviews.
‘लभ लभ लभ’ को भ्यालेन्टाइन क्विजका बिजेता घोषणा
स्व.श्रीकृष्ण जन्मेको सिन्धुपाल्चोकमा श्वेताको सहयोग
English	Dec 4, 2017
It seems that, for Actress Keki Adhikari, her producton debut ‘Kohalpur Express’, is not going…